Qof kasta ma i bari karaa sidii dib loogu soo celin lahaa sida ugu macquulsan?
Dhab ahaantii, waa geedi socodka abuurista kale ee shabakadaada ama blogka maaha mid aad u adag sidii aad u malayn lahayd. Ku dhajinta Ingiriisi cad ah, isku xirka dhismaha ee SEO wuxuu u taagan yahay heshiis faa'iido leh. Ereyada fudud, macneheedu waa dib u helidda gadaashooyinka ku qoran boggagaaga iyo inaad siiso. Dhab ahaan, codsashada istiraatiijiga dhismaha tayada dhismaha tani waa sida ugu wanaagsan ee lagu xoojin karo istaraatiijiyada guud ee SEO ee miisaanka. Laakiin kahor intaad ku tusin lahayd sida aad dib ugu dhejin lahayd - si sahlan iyo sahlan - waxaan ku siinayaa erey taxadar leh. Maskaxda ku hay, in talooyinka dhismaha ee soo socda ay yihiin 100% wakhtigan xaadirka ah. Laakiin ma jirto wax damaanad ah oo ah in naga dhigo wax fiican in maanta la sii wadi doono isla maalinta berri. Sidaa darteed, hoosta ayaa ah tallaabooyinka dhabta ah ee la ansixiyay xilligan. Waxaan rajeynayaa in ay kaa caawin doonto inaad fahamto sida dib loogu dhejiyo boggaaga ama blog -kaga - adigoon wax kharash ah lagaa qaadin, kaliya bixinta waqtiga iyo dadaalkaaga. Jadwalka Boostada
Ma jiro wax aan caadi ahayn oo ku saabsan helitaanka qaar ka mid ah garabyada qiimaha leh oo abuura jadwalka jadwalka. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan waa inaad qorto wax badanna sameyso. Hubi in makiinadaha raadiyeyaashu ay si guul leh u ogaan doonaan joogitaankaaga - ha iloobin inaad soo cusboonaysiiso cusboonaysiinta soo noqnoqoshada ee ku jira boggaaga. Anigu shakhsi ahaan baan kugula talin karaa inaan shardi ka dhigo tayada, intii aan ahayn tirada. Waxaan loola jeedaa in qoraallada laba ama saddex ee wax lagu qoro ay yihiin kuwo dhab ah oo loo baahan yahay in la sameeyo si loo kordhiyo qaar ka mid ah taageerooyinka dheeraadka ah ee u adeegaya horumarkaaga. Xusuusnow - waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo aad ku isticmaali karto keywords bartilmaameedka ugu weyn ee loogu talagalay boostada blog. Iyo, dabcan, isku day inaadan dhaafin ereyada muhiimka ah, haddii aadan rabin qoraalladaada inay u ekaadaan sida spam. Sidaa samee, tixgeli inaad maalgeliso wakhti ka mid ah dhismaha isku-xidhka iyadoo la adeegsanayo barta casriga ah, qorista faallooyinka, iyo faallooyin caqli-gal ah, ugu yaraan dhinaca saddexaad ee ilaha ugu sareeya ee ganacsigaaga ganacsiga ama mawduuca mawduuca.
Baaritaanka qoraalka iyo macnaha ereyga
Looma baahna in la sheego in macnaha ereyga muhiimka ah ee macquulka ah ay tahay meesha ugu horeysa ee lagu bilaabo hagaajinta SEO-gaaga miisaanka. Marka loo eego dhismaha gaar ahaan, waa inaad taqaanaa sida dib loogu dhejiyo qoraalka saxda ah. Si aad u hesho waxkasta oo dhan, ha ka waaban inaad isticmaasho Google AdWords ama qalab kale si aad mar labaad ugu falanqeynto ereyga muhiimka ah ee muhiimka ah - waqtigaan si adag ujeedo ujeedo dhisida ujeeddo. Dhab ahaan, marka ay timaaddo qaabaynta qoraalka dhammaystiran ee ku habboon, qoraalka macnaha ayaa macno samaynaya. Tusaale ahaan, ereyada caadiga ah sida "kharashka suuq-geynta warbaahinta ee bulshada" waxay yeelan kartaa semantics mid muuqata. Si kastaba ha noqotee, albaabka ayaa mar walba u furan inuu kordhiyo taraafikadaada - adigoo badalaya kelmad kelidiis ah, ama qaadashada midka ugu fiican.
Website-kiisa Dhismaha iyo Iskuduwid
Mar walba ku dheji khadadka gudaha ee tilmaamaya qaybaha kala duwan ee boggaaga ama bloggaaga. Waxaa lagugula talinayaa in aad ku darto bogaga ugu booqashada badan, oo aad sameysid xiriir macquul ah oo ku saabsan boggaaga ama boggaga soo degaya. Dabcan, noocan oo kale ah ee xiriiriyeyaashu waxba kuma laha taxanaha raadinta Google, ugu yaraan si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, weli waa fursad aad u wanaagsan ma aha oo kaliya in la dhiso qaar ka mid ah xiriirada dheeraadka ah laakiin waxay gacan ka geystaan ​​dhismaha website-ka adag. Si kastaba ha noqotee, kobcinta website-kaaga ama blog-kaaga meel aad u sahlan oo la isticmaali karo ayaa noqon doonta go'aan aad u wanaagsan. Ka dib oo dhan, waxaad ka faa'iideysan kartaa booska sare ee lagu siinayo waqti dheer - sababtoo ah dhismahaaga boggaagu waa mid waxtar leh oo wuxuu soo dhaweynayaa qof kasta oo soo degay halkaas Source .